Oromo – DINAGDDEE.COM
Dur ilmii Oromoo – yoo lolatuu, Shimala qaqee – waaliin dhayee yoo qolatuu! Lola shaakaluu – dhiichiisaa, Booree galee kaasani – garaa wal boreesaa! Waraanaa yoo qophaawuu, Guyyaa giitiif – yoo si’aawuu! Yoo harqqaa geerraru – diina kokkee qaabuuf hudhee, Akkas jedha turee – wal jelaa fuudhee! “Ya hiriyee sii Read more…